Akora McDonnell Douglas DC-10-30 United Airlines FS2004 - Rikoooo
Mpanoratra: Staffan Ahlberg Mike Baumann Fraser Turner
Fipoitra tokana, fitsidihana mahafinaritra sy fahita mahazatra. Vakio ny torolàlana eo amin'ny tontonana, modely ambony.
Ny DC-10 dia McDonnell Douglas ho an'ny fiaramanidina maoderina telo, novokarin'ny orinasa Douglas Aircraft Company, hatramin'izao no lasa ny Division Long Beach an'ny Boeing Commercial Airplanes. Izy no mpandimby ny Douglas DC-8 akaiky an'i Douglas fahiny. Ny famokarana dia nanomboka tamin'ny Janoary 1968 ary ny kopia voalohany dia natolotra tao amin'ny 1971. Nosoloina tao amin'ny 1990 avy amin'ny McDonnell Douglas MD-11 izy io. Izy io dia novokarina teo anelanelan'ny 1971 sy 1989 ka hatramin'ny 386 kopia mihoatra ny 60 KC-10 (modelina mpamokatra ho an'ny Air Force US).